Barea hatramin’ny farany! - ewa.mg
Barea hatramin’ny farany!
Foot - News - Sport - Barea hatramin’ny farany!
Henjana ao anatin’ny henjana ! Io ny azo ilazana ny Barea taorian’ny fandresena miezinezina azony, omaly, tao anatin’ny lalao ampahavalon-dalana, nifandonana tamin’ny ekipan’ny Repoblika Demokratikan’i Kongo. Misandratra avo ny voninahi-pirenena malagasy, nisongadina tao anatin’ireo firenena noheverina ho voadingana eo amin’ny sehatry ny baolina kitra afrikanina i Madagasikara. Faly ny vahoaka malagasy! Nidera eram-po eran-tsaina ireto maherifon’ny Malagasy ireto i Madagasikara iray manontolo, niaiky izao tontolo izao. Ny Barea hatramin’ny farany, tsy maintsy mandresy! Io ny ambentin-teny re teny am-bavan’ny rehetra, mandra-maraina ary hitohy hatramin’ny farany, hanosika ny Barea ho amin’ny ambony hatrany. Alefa Barea! Alefa hatramin’ny farany, manohana ary miara-mirona ny Malagasy 20 tapitrisa, ao an-damosina tsy hiala hatramin’ny farany.
Fitaintainana no niainana, saingy fandresena ny setrin’izany rehetra izany! Hatramin’ny sengondra farany, tsy nisy niala fa nankahery, nitabataba, nivavaka ny rehetra. Nandresy ny Barea, hiakatra ho an’ny amin’ny ampahefa-dalana, tranga tsy nampoizin’ireo firenena mpifanandrina, saingy efa voasoratra ho an’ny Malagasy. Tantara iray tsy ho voafafa mandrakizay eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena malagasy sy ho an’i Madagasikara iray manontolo izao fandresena miezinezina izao, izay irariana hitohy hatramin’ny farany! Ny Barea hatramin’ny farany!
Samy naneho ny hafaliany ny rehetra, hafaliana tsy omby tratra, hafaliana nivadika ho fihavanana sy firaisankina, faly ny Malagasy! Raha izao herim-pontsika izao, ho lasa lavitra ny Barea an’i Madagasikara, nitondra anjara biriky lehibe ho fanomezana hery ireto mpilalaontsika ireto ny fiombonam-pon’ny Malagasy toy izao, hampitombo ny herijika, vao mainka hampisandratra amin’ny faratampony ny voninahi-pirenena, hiroso hatrany ny Barea, tsy miverin-dalana intsony. Lalana efa natomboka, tsy maintsy vitaina hatramin’ny farany. Hatramin’ny farany, mandresy ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barea, Alefa Barea, Alefa hatramin’ny farany! Ao an-damosina hatrany ny Malagasy tsivakivolo!
L’article Barea hatramin’ny farany! a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 08/07/2019
Barea - CAN - Can 2019 - Kitra
Niatrika ny lalao fiadian-toerana ny ekipa malagasy, MB2All, omaly tany Maputo, Mozambika, nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, ho an’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy, taranja basikety. Eo amin’ny laharana faha-8 ny misy an’i Madagasikara, taorian’ny faheresena nanoloana ny ekipan’ny KPA avy any Kenya. Hita ho nanezaka mafy ireto mpilalao malagasy nanomboka tany amin’ny ampahefa-potoana voalohany. Nitarika tamin’ny isa 12 noho 6 ny ekipa Malagasy, saingy nanantombo kosa ry zareo Kenyanina nandritra ny ampahefa-potoana faharoa ka noverezin’izy ireo tamin’ny isa 24 noho 19 indray ny Malagasy. Nampitombo ny teknika teny ambony an-kianja ny ekipa malagasy tamin’ny ampahafefa-potoana fahatelo ka nitarika tamin’ny isa 39 noho 37. Tsy nanaiky lembenana anefa, tetsy ankilany, ny KPA avy any Kenya ka tsy nitsahatra nampitombo isa. Nisesisesy ny isa telo ka nanomboka nibanaka ny elanelanelana teo amin’ny roa tonta. Nivoaka mpandresy ny ekipan’ny Kenya ka isa 52 no ho 49 ny nandavoany ny MB2All. Raha tsahivina,10 ny ekipa nandray anjara tamin’ity fifaninanana afrikanina amin’ny taranja basikety ity ary notsinjaraina ho vondrona roa. Ekipa fahaefatra tao amin’ny vondrona nisy azy i Madagasikara rehefa avy nifanandrina tamin’ny Lakers avy any Mozambika ka nibata ny fandresena tamin’ny isa 58 no ho 48. Nihintsana teo amin’ny lalao ampahefa-dalana kosa rehefa nifampitana tamin’ny ekipa kalaza Inter Clube avy any Angola. Isa mavesatra 78 no ho 46 ny nandavoan’ny Angoleizy ny ekipa malagasy tamin’izany. Azo lazaina ho ratsy ihany ny vokatra, saingy ampy hakana lesona ny fiatrehana ity fifaninanana ity, raha ny nambaran’ny mpanazatran’ny MB2All. “Zava-dehibe ny fandraisana anjara tamin’ny lalao iraisam-pirenena toy itony”, hoy hatrany ny fanazavana. Mi.RazL’article Basikety – CACC: laharana faha-8 ny MB2All a été récupéré chez Newsmada.
Notanterahina, ny asabotsy 8 desambra sy omaly alahady 9 desambra, ny lalao fiadiana ny tompondaka nasionaly, sokajy “seniors”, taranja badminton. Samy niezaka nanome ny tsara ireo mpandray anjara rehetra, saingy tena nanjaka ny klioban’ny Baobad sy ny avy amin’ny lisea Saint Michel Itaosy. Raha atao mantsy ny kajy, medaly volamena miisa telo avy ny azon’ireto klioba roa ireto nandritra ity fifaninanana ity.Tompondakan’i Madagasikara lehilahy, sokajy A, i Haja Marc (Baobad), rehefa avy nandavo an-dRakotoarinaivo Herizo (ABC Antsirabe), tamin’ny seta 2 no ho 0. Ho an’ny sokajy B sy C kosa, tompondaka Randrianantenaina Sitraka (Baobad), 2 no ho 0; sy Ramanjakanoro Mialy (LSM Itaosy), seta 2 no ho 0.Ho an’ny sokajy “vétérans” lehilahy kosa indray, nanamarika isa ambony Rakotomalala Zo nanoloana an-dRakotozafy Mon Claire ka nibata ny fandresena, tamin’ny seta 2 no ho 1.Raha toa ka nanao pao-droa ry zareo avy ao amin’ny Baobad ho an’ny sokajy lehilahy, nanjaka kosa ny klioban’ny Saint Michel Itaosy, nandritra ny lalaon’ny vehivavy. Norombahin-dRazanamaly Ntsoaniaina sy Razafinimanana Miangola, avy amin’ny LSM Itaosy, mantsy ny amboara ho an’ny sokajy A sy C. Ramanandraisoa Sahondra (Baobad) kosa ny nahazo ny fandresena ho an’ny sokajy B, nanoloana an-dRasolomanana Voahangy, mpilalao avy amin’ny Baobad ihany. Amboara sy loka maro ny nozaraina ho an’ireo mpilalao mendrika, natolotry ny federasiona malagasy ny badminton.Nihanitombo ny traikefan’ireo mpilalao tamin’ity lalao fiadiana ny tompondaka nasionaly 2018 ity, raha ny nambaran’ny mpitsara ny lalao sy ny mpikarakara izao fifaninanana izao. Manana hoavy mamiratra ary antenaina ny hivelaran’ny badminton eto Madagasikara, indrindra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Efa manao ezaka rahateo ny federasiona amin’ny fampitomboana ny traikefan’ny mpanazatra sy ny mpilalao amin’ny alalan’ny fanomezana fampiofanana azy ireo. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ho amin’ny taom-pilalaovana 2019 izany, raha ny fanazavana nentin’ny federasiona. Mi.RazL’article Badminton: nanjaka ny Baobad sy ny klioban’Itaosy a été récupéré chez Newsmada.
BASKET-BALL CACC 2018 :: Tafita hiatrika ny ampahefa-dalana ny MB2All
Nanoratra tantara ho an’ny basket-ball malagasy ny klioba MB2All vehivavy. Sambany no hisy klioba malagasy hiatrika ny dingan’ny ampahefa-dalana eo amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, ho an’ireo ekipa tompondaka. Fandresena tokana tamin’ ireo lalao efatra nataony, nanoloana ny Lakers avy any Zimbaboe, no nampiakatra ny ekipan’i Ndranto Rakotonanahary, ho eo amin’ io dingana io. Tamin’ny alalan’ny isa 58 noho 48 no nandresen’izy ireo an’ity solontena zimbaboeana ity. Isan’ireo ekipa valo voalohany aty Afrika, amin’ireo folo mifaninana, izany ny ekipan’ny MB2All. Teo amin’ny ampahe­fa-potoana voalohany dia nita­rika ny ekipa zimbaboeana (11 – 13). Nanomboka teo amin’ny ampahefa-potoana faharoa no nanomboka nihiratra ny masoandrom-panantenana ho an’ity solontena tokan’i Madagasikara, any Maputo Mozambika ity. Nitsimbadika ho 26 noho 21 ny isa teo amin’ny fotoam-pialan-tsasatra, raha 39 noho 32 kosa teo amin’ny fiafa­ran’ny ampahefa-potoana fahatelo. Faharesena intelo sy fandresena tokana no azon’ny tompondakan’ny ranomasimbe Indianina tamin’ny lalaom-bondrona. Ny ekipan’i Interclube Desportivo avy any Angola, izay nahavita fandresena efatra tamin’ireo lalao efatra nataony teo amin’ ny vondrona A, no hifanan­drina amin’ny MB2All eo amin’ ny ampahefa-dalana, anio. Sarotsarotra ihany ny lalana ho an’ny solontena malagasy saingy mila miady mafy izy ireo raha te ho eo amin’ny dingan’ny manasa-dalana. L’article BASKET-BALL CACC 2018 :: Tafita hiatrika ny ampahefa-dalana ny MB2All est apparu en premier sur AoRaha.
Kempo – Fiofanana: afa-po ny mpandray anjara
Tsy ampy ny fotoan’ny fifampizarana, tapany voalohany, ho an’ny mpitarika mpanampy, taranja kempo sy MMA. Fiofanana notanterahina ny asabotsy lasa teo tao Mahamasina. Nanapa-kevitra ny hitady fotoana malalaka, ny volana janoary 2019, araka izany, ny mpikarakara hanomezana fahafaham-po ireo mpandray anjara. Ny volana febroary 2019 kosa no hamaranana tanteraka ny fiofanana ho an’ny mpitarika mpanampy ka hotsinjaraina amin’izany, araka ny sokajy misy azy avy, ny mpiofana.Raha hiverenana ny fiofanana ny asabotsy teo, 12 ireo tonga namaly ny antso avy amin’ny klioba miisa dimy: ny Club WFC Mahamasina, ny CSLA Ambohimanarina, ny Tsunami Betongolo, ny J&K Fitness 67ha ary ny Temple’s Artiste Itaosy. Nampitain’ny mpampiofana, Rakotonindriana Parfait, tamin’ireo mpanampy mpitarika ny mahakasika ny karazan’olona hampianarina ity taranja ity sy ny fahalalana ankapobeny, indrindra eo amin’ny fiarovantena.Any Ambositra indray ny hanohizana ny fifampizarana avy amin’ny filohan’ny komity mpitantana kempo sy MMA, ny 21 sy ny 22 desambra izao. Ny 29 desambra kosa, hiditra amin’ny fifaninana voalohany ho amin’ity taom-pilalaovana ity ireo klioba eo anivon’ny komity. Mi.RazL’article Kempo – Fiofanana: afa-po ny mpandray anjara a été récupéré chez Newsmada.
Tapitra hatreo ny lalan’ny Barea de Madagascar eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja beach soccer. Mbola resin’i Maraoka indray ny Malagasy, teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Lavon’ny Liona-n’i Atlas avy any Maraoka, tamin’ny isa 6 no ho 4, ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja beach soccer, ho an’ny sokajy “A”. Fihaonana, notanterahina omaly talata, tao amin’ny kianja Laguna Vista Stadium, Sharm El Sheikh.Sahirana ny Barea de Madagascar satria nofehezin’ny Maraokanina tanteraka ny lalao tao anatin’ireo fe-potoana 12 mn, intelo miditra. Vao nanomboka dia efa nitarika an’isa ny Maraokanina. Tao anatin’ny minitra 5 monja dia efa nitarika tamin’ny isa, 3 no ho 0 ry zareo.Tsy tafiditra mihitsy ny mpilalao malagasy fa toa niharitra ny fanafihana nataon’ny mpifanandrina.Nanao fahadisoana matetika ihany koa ry zalahy ka nanome vahana ny Maraokanina, tamin’ny “coup de pied arrêté”. Teo amin’ny fiafaran’ny fizaram-potoana faharoa, nitarika 5 no ho 0 ny Maraokanina. Anisan’ny nampiditra baolina tamin’izany, ry Abada sy i Iazal ary El Hadaoui. Taorian’io vao nifoha tamin’ny torimasony ry Romain sy i Enidiel ary ry Tinasoa. Niezaka nanafika sy nanao izay ho afany, saingy efa nahazo tombony lavitra ny Maraokanina, ka sarotra ny nanenjika azy ireo.Na nahatafiditra baolina aza mantsy ny Barea de Madagascar, mbola nanampy isa ho azy ihany koa ry zareo, ka tsy nisy fanafany intsony. Manohy ny lalany ary hiatrika ny manasa-dalana, ho an’ny sokajy “A”, izany, ny liona-n’i Atlas, miaraka amin’ny Faraonan’i Egypta.Hiady ny toerana fahadimy kosa ny Barea de Madagascar, amin’ity alarobia ity ka hifanandrina amin’i Tanzania, laharana fahefatra, tao amin’ny sokajy “B”.Efa tafakatra amin’ny ankatoky ny famaranana ihany koa ny liona Teranga avy any Sénégal sy ny voromaherin’i Nizeria. TompondakaL’article Beach soccer – «Can 2018»: nihintsana ny Barea de Madagascar a été récupéré chez Newsmada.
Mitady ekipa vaovao ho an’i Carmelo Anthony ireo manodidina azy
Na dia nandà ny tsaho mikasika ny hialan’i Carmelo Anthony ao amin’y Rockets aza i Daryl Morey, dia efa mazava izao fa tsy ahita azy hiara hilalao amin’i James Harden sy i Chris Paul intsony isika. Tsy nety ilay fiarahana, ary i ESPN dia nilaza fa ireo olona manodidina azy dia nandany fotoana mihitsy tamin’ny alatsinainy ny hamantatra ny heritreritr’ireo ekipa hafa momba an’i Carmelo. Ny tanjona dia ny ahita ekipa hafa ho azy alohan’ny tena ialany ao amin’ny Rockets, ankehitriny izy dia tsy milalao intsony noho ny « aretina » raha ny filazan’ireo mpitantana. Ny olana dia efa ambany dia ambany ny fahatokisan’ny olona an’i Carmelo, indrindra tao aorian’ny nandalovany tao amin’ny Thunders ary ity tsy fahombiazana tato amin’ny Rockets ity. Mbola manohy manohana azy anefa ireo namany Dwyane Wade sy LeBron James. Andeha hanamporofo ve i Melo fa tsy mbola very ny fahaizany raha miaraka amin’ny ekipa mahatoky azy izy ? ireo ekipa mety ho liana anefa dia mety tena ho vitsy dia vitsy tokoa, ary ny ankamaroan’izy ireo dia mety ho voatery handroaka mpilalao hafa vao afaka maka an’i Anthony. Azo heritreretina koa fa te hiaraka amin’ny ekipa efa sangany i melo kanefa izany dia vao maika ahavitsy ireo « options » ananany.
JIOI – Fampivondronana: hifarana anio ny tapany voalohany
Mandeha ny fotoana, tapitra sahady ny tapany voalohany amin’ny fampivondronana ireo atleta hifantenana handray anjara amin’ny lalaon’ny Nosy, hatao any Maorisy, ny volana jolay izao. Ity tapany voalohany ity izay nanomboka ny 23 marsa lasa teo ka hofaranana anio. Raha ny tokony ho izy, amin’ny herinandro vao tena feno ilay 35 andro, saingy amin’ny maha fety ny andro, dia nanapa-kevitra ny teo anivon’ny ministera ny hanakatona izany amin’ity herinandro mialoha ny fetin’ny Paska ity.Araka ny loharanom-baovao, saika afa-po tamin’ny fanazaran-tena avokoa ireo atleta rehetra isaky ny federasiona, na dia nisy aza ireo nanana olana teo amin’ny tsy fahampian’ny fotoana.Ho an’ny taranja volley ball manokana, nahitana taratra sahady ireo izay tena mendrika iny tapany voalohany iny. Nanambara ny mpanazatra nasionaly eo amin’ity taranja ity fa izay tena mahay no ho antsoina indray hiatrika ny tapany faharoa amin’ny fampivondronana.Izay tena hita fa afaka misolo tena an’i Madagasikara no ho any Maorisy fa tsy misy ny fanavakavahana.Marihina, niavaka ny fandraisana ireo atleta ao anatin’izao fanomanan-tena izao satria miara- mipetraka amin’ny hotely lehibe avokoa izy rehetra ary efa samy manana ny toerana fanaovana ny fampivondronana ny taranja tsirairay. Etsy ankilany, tsy tapaka manara-maso sy mijery akaiky ireo atleta ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena ary indrindra ireo minisitra mpiahy isanisany izay manolotra fanampiana ihany koa. Mi.Raz L’article JIOI – Fampivondronana: hifarana anio ny tapany voalohany a été récupéré chez Newsmada.
Zahana toetra ny faharetan’i LeBron James
Faharetana. Hatramin’ny nahatongavan’i Lebron James tao amin’ny Lakers, dia eo ambavan’ny olona rehetra aty Californie izany teny izany, na dia tsy mora aza ny mampihatra azy. Kanefa na dia kely fotsiny foana aza ny faharesena azon’izy ireo, dia mampikorontana ihany ireo tsy fahombiazana eo amin’ny defense, indroa nandresy tao anatin’ny lalao fito. Koa dia nibedy mafy an’i Luke Walton i Magic Johnson, na dia mamerimberia foana isaky ny lalao ny « King » fa tsy hilamina tampoka ohatry ny magie magie io zavatra io. « Izany no notoriako hatramin’ny fiatombohan’ny saison : mila faharetana », araky ny nohazavainy tany Portland 10 andro lasa izay. « ny tsirairay aminay mahalala fa tokony ho hitanay izay tsara vitanay sy izay tsy mety ihany koa. Ny mampitombo an’izay fiaraha-milalao izany dia tsy mora araky ny heritreretinareo. Tsy tahaka ny hoe zavatra mamatam-bonona io. » Na izany aza tsy mahataty faharesena i Lebron ary manomboka leo ihany ko aizy. « Tsy niteny mihitsy aho, fa fantatrareo aho, fantatrareo ny toetrako », raha ny nazavainy tamin’i Yahoo ! Sports. « Saika kivy aho tamin’ny herinandro. Tsy maintsy nipetraka aho dia niteny tamin’ny tenako ho : « efa fantatr’ialahy tsara ny zavatra nidiran’ialahy ». tsara ho anahy izany lalana nodiavina izany. Mila manahy ny faharetana aho. » Hatramin’io fiatombohana sarotsarotra io, dia nihezaka ny Lakers. Marina fa nananosarotra ny fandresena kanefa fandresena dimy ao anatin’ny lalao enina izao ry zareo, ka dia efa mihoatra ny 50% izany ny fandresena ananany. Miampy ny fanampian’i Tyson Chandler eo amin’ny Defense, dia afaka mifantoka amin’izay izao ny Lakers. Ny tapa-bolana ho avy izao izao dia afaka ny hanaovana an’izay satria mila mandray an’ny Portland sy Utah izy ireo, ny lalao roa amin’ny Magic sy ny dia atao ho any Miami sy i Cleveland dia mety mbola afaka hanampiana ny fandresena. Sady hampatsiahy zavatra an’i Lebron ihany koa…
Deco : “Ronaldinho no tena mahay indrindra”
Tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ny AS, i Deco, izay efa samy niara nilalao tamin’i Lionel Messi sy i Cristiano Ronaldo, dia nandray anjara amin’ny ady hevitra "Ronaldo/Messi" izay resaka mafampana nandritra ny taona maro. Fa mifanohatra amin’ny mety ho noheverina, dia sady tsy naka ilay iray na ilay hafa ilay Portugais. Nandalo tao amin’ny FC Barcelone teo anelanelan’ny 2004 sy 2008, i Deco mpilalao ekipa nasionaly portugais taloha dia nanamarika ny talentan’i Ronaldinho, izay mbola mpilalao nampitolagaga azy indrindra hatramin’izao. "ny nampitolagaga ahy indrindra, na tsy dia hoe nanova ny fizotran’ny lalao tahaka ny sasany aza izy dia i Ronaldinho. Ho ahy, ho izy foana no mpilalao mahay indrindra maneran-tany", hoy i Deco. Fa nomarihiny ihany mikasika an’i Cristiano Ronaldo sy i Lionel Messi : "izy ireo no goavana ndrindra, satria nanao izay tsy vitan’nyhafa hatramin’izay izy ireo." Samy nahazo dokadoka avokoa izany.
Izay vao tena raikitra ary ofisialy eo anivon’ny Fifa, araka ny vaovao amin’ny tambajotran-tsosialy, omaly. Tsy miova izany ny firenena handray ny fiadiana ny amboara eran-tany «Mondial 20­22», taranja baolina kitra, fa i Qa­tar. Hotanterahina any amin’ io fi­re­nena izany, saingy tsy ho tahaka ny mahazatra ny fotoana ha­na­tanterahana izany fa ha­no­mboka ny 21 novambra hatramin’ ny 18 desambra amin’ny taona 20­22. Lalao efatra isan’andro no hatao amin’ny fifanintsanana isa­ky ny sokajy ka amin’ny 1 ora antoandro hatramin’ny 10 ora alina iza­ny. Miisa valo ireo kianja ka handraisana ny lalao fanokafana ny kianjan’i Al Bayt, mahazaka mpijery miisa 60 000. Hotanterahina any amin’ny kianjan’i Lusail, ma­hazaka mpijery miisa 80 000, ny lalao fa­maranana.Ekipam-pirenena dimy hisolo tena an’i Afrika Ho an’ny Barea manokana, miray vondrona amin’ny RD Con­go sy i Benin ary i Tanzania ao amin’ny sokajy J amin’ny fi­fanintsanana aty Afrika. An­isan’ireo firenena 40 mandray anjara, mizara amin’ny sokajy folo amin’izany ny ekipam-pirenena malagasy. Hiady ny toerana ho anisan’ireo firenena dimy hisolo tena an’i Afrika hiatrika ny «Mondial» hatao any Qatar.Synèse R.L’article Kitra – Fiadiana ny amboara eran-tany : ho raikitra any Qatar amin’ ny novambra 2022 ny «Mondial» a été récupéré chez Newsmada.
« Doritos la relève »: mitohy ny fihodinana faharoa amin’ny fifaninanana
Hanomboka ny faran’ity herinandro ity ny fihodinana faharoa amin’ny fifaninanana « Doritos la relève » iandraiketan’ny mpanazatra teo aloha ny Barea, i Nicolas Dupuis. Tontosaina etsy amin’ny kianjan’ny Cnaps Vontovorona ny fifandonana eo amin’ireo ekipa eto Antananarivo Renivohitra ny 31 jolay sy ny 1 aogositra ho avy izao. Hifanandrina mandritra izany ny ekipa miisa 32 ka samy hitiliana ireo mpilalao sangany ahafahana manatanteraka ny vinan’ny filoham-pirenena amin’ny fanatontosana tsy ho ela ny akademia Barea. Tsy eto an-dRenivohitra ihany, hitohy hatrany amin’ny faritany ny fitiliana ataon’ity mpanazatra ny ekipam-pirenena teo aloha ity ka aorian’ny eto Antananarivo, ireo tanora ao Mahajanga indray no hanohizany ny fikarohana. Ny 3 aogositra hatramin’ny 10 aogositra izao ny anjaran’ny any an-toerana ka azon’ireo mpandray anjara atao ny misoratra anarana ao amin’ny Fosa Juniors. Ireo tanora teraka tao anelanelan’ny 1 janoary 2006 ka hatramin’ny 31 desambra 2007 no kendrena manokana amin’ity hetsika ity.Tsiferana R.L’article « Doritos la relève »: mitohy ny fihodinana faharoa amin’ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
Tsaralalàna: saron’ny zandary ny orinasa mpamboatra “plaque chassis” hosoka
Hiakatra fitsarana, anio, ireo olona telo amin’ireo enina voarohirohy ho tompon’antoka tamina fanamboarana “plaque chassis” hosoka amina orinasa kely iray eny Tsaralalàna. Tratra niaraka amin’izy ireo ny fitaovana samihafa fanamboaran’izy ireo izany…Noraisim-potsiny! “Nahazo loharanom-baovao izahay eto anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa misy orinasa kely iray eny Tsaralalàna manamboatra “plaque chassis” hosoka. Niainga avy amin’izany no nametrahana ny vela-pandrika rehetra hahafahana misambotra ireo olona tompon’antoka amin’izany”, hoy ny fanazavan’ny GPCE, Randriambololona Jean Françisco, miasa ao amin’ny sampandraharaha miandraikitra ny heloka bevava sy manokana. Nametraka ny paikady rehetra sy ny fitsirihana ity orinasa ity ny zandary ka voamarina ny fisian’ireo mpanao hosoka. Niroso amin’ny fisavana ny trano ny zandary rehefa nahazo taratasy avy amin’ny fitsarana ka hita tamin’izany ireo fitaovana fampiasan’izy ireo. Nosamborina ihany koa ny olona enina ka isan’izany ny mpitantana ity orinasa kely ity. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny zandary. Efa hatramin’ny taona 2020 izy ireo no nanao ity asa ratsy ity, saingy izao vao tratra, araka ny fanazavan’izy ireo nandritra ny famotoran’ny zandary.Ny DGSR irery ihany no afaka manamboatra “plaque chassis”…Heloka anenjehana azy ireo ny fanaovana hosoka sy ny fampiasana hosoka “plaque chassis” araka ny fehezan-dalàna famaizana 139. Nilaza izy ireo fa 69 500Ar (raha 75 000Ar kosa eny amin’ny DGSR) ny hanamboarany ny “plaque” iray. Nambaran’ny tale jeneralin’ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR), ny Jly Tsirivelo Nicolas, kosa fa ny DGSR irery no sampandraharam-panjakana voatondron’ny lalàna hanamboatra ny “plaque chassis” sy manana ny fitaovana arifomba fanamboarana izany satria hita ao avokoa ny PV nandritra ny fitsirihana ara-teknika tany amin’ny fitsarana fiara. Manentana ireo tompona fiara mampiasa “plaque chassis” hosoka hanatona ny DGSR hisorohaha ny hosoka sy ny fampiasana hosoka satria tsy maintsy hita any amin’ny fitsirihana ny fiara ny fampiasana izany ka mety hidirana am-ponja, araka ny nambarany hatrany.Jean ClaudeL’article Tsaralalàna: saron’ny zandary ny orinasa mpamboatra “plaque chassis” hosoka a été récupéré chez Newsmada.
Zaza vao herintaona ny iray ary 10 taona ny iray hafa. Ireo no nanampy ireo mpandeha efatra namoy ny ainy tamin’ilay loza mahatsiravina teny Andranofotsy RN4, omaly maraina. Taksiborosy avy any Mahajanga ity niharan-doza ity. Ankoatr’ireo maty, marobe ireo naratra mafy.Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray ny lalam-pirenena fahefatra, omaly maraina tokony ho tamin’ny 5 ora. Tra-doza tamin’izany ny taksiborosy mampitohy an’i Mahajanga sy ny Renivohitra teo amin’ny fokontany Andranofotsy Fandrosoana, kaominina ambanivohitr’i Fihaonana, distrikan’Ankazobe. « Nifanena tamina kamiao iray ilay taksiborosy ka nandona mafy an’ilay bisikileta teo alohany », hoy ny fanazavan’ny zandary ao Fihaonana misahana ny famotorana. Nambarany fa vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza. Vokany, nivoaka ny arabe sy nivadibadika tany ankavian-dalana ilay fiara. Maty teo no ho eo tamin’izany ny olona miisa telo. Isan’izany ilay lehilahy nitondra bisikileta, ny zaza iray sy ny rangahy lehibe mpandeha tao amin’ilay taksiborosy. Marobe ireo naratra mafy sy voatery nalefa vonjimaika teny amin’ny toeram-pitsaboana ao Fihaonana, Andranovelona sy ao Bejofo Mahitsy. Tsy tana anefa ny ain’ny telo tamin’ireo naratra mafy izay nahitana zaza iray.Isan’ireo naratra ihany koa ny mpamily ny fiara, saingy tsy ahina ny ainy. Ny sasany amin’ireo mpandeha, mbola manohy ny fitsaboany eny amin’ny HJRA. Ny vata-mangatsiakan’ireo mpandeha sasany kosa, efa eny anivon’ny fianakaviany tsirairay avy raha mbola miandry ny azy kosa ny roa hafa. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, efa tsy eo an-toerana intsony ilay taksiborosy miasa ao amin’ny kaoperativa Kofila. Efa natao andrimaso ihany koa ny mpamily, misokatra manaraka izany ny famotorana ny raharaha.Matetika isehoan-dozaIsan’ireo lalam-pirenena isehoana lozam-pifamoivoizana matetika ny lalam-pirenena fahefatra. Tsy vitsy ireo efa namoy ny ainy, marobe ihany koa ireo naratra mafy vokatry ny fandehanana mafy.Efa tafiditra anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra ihany koa isika izao, marobe ireo fiara fitaterana avy eto an-drenivohitra mihazo an’i Mahajanga. Tokony ho mailo, araka izany, ny tsirairay. Ilaina ihany koa ny famerana ny hafainganam-pandehan’ireo fiara hisorohana ny loza. Henintsoa HaniL’article RN4 – Taksiborosy nivadibadika: olona enina indray maty, zaza herintaona ny iray a été récupéré chez Newsmada.
Maep: hita ny paikady hampandrosoana ny fiompiana
Natao ny 22 hatramin’ny 24 jolay teo ny atrikasa lehibe entina hampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana, notarihin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep). Voafaritra ny paikady hamaritana ny laharam-pahamehana isan-tsokajiny avy. Nampahatsiahivin’ny tale jeneralin’ny Fiompiana (DGE), Andriamahatola Tsiry Lezoma, fa natao ity fikaonan-doha ity satria tsy nisy ny antontan-kevitra lasitra hatao tondrozotra hamelomana indray ity sehatra ity. Tanjon’ny minisitera ny nanangona ny soso-kevitry ny mpisehatra rehetra, toy ny mpiompy, ny mpanodim-bokatra, ny mpanondrana, ny mpandraharaha amin’ny sakafom-biby sy ny akora ilaina, sns.Nandravona ny paikady isan-tsokajiny entina mitantana ny asam-baomiera. Ao anatin’izany ny lafiny lalàna, ny olona hisahana ny teknika, ny enti-manana ara-teknika sy ara-bola. Eo koa ny tetikasam-pampandrosoana isaky ny lalam-pihariana, toy ny fiompiana omby, ny biby miraok’ahitra, ny akoho amam-borona, ny kisoa, ny tantely, sns.Mpiompy madinika sy ny indostrialyNilaza i Zafisolo Louis, miompy ondry sy osy any amin’ny faritra Androy, fa namantarako ny tena ilana ny fifotoran’ny mpiompy ho matihanina ity fotoana ity. Ilaina ny fanisana ny isan’ny biby ompiana, ny fanatsarana ny lalàna sy ny sakafom-biby. Hampiakatra ny lanjan’ny lalam-pihariana ataonay ireo izay tsy voajery hatramin’izay.Hoan-dRtoa Razafindraibe Haingotiana, filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Malagasy Dairy Board (MDB), anisan’ny orinasa indostrialy amin’ny fiompiana, “nohenoina sady noraisina ny hetahetanay sy ny soso-kevitray. Misokatra ny fifampidinihan’ny tsy miankina sy ny fanjakana. Antenaina fa hisarika ny orinasa indostrialy hafa izao dingana vita izao. Samy miandry ny fanatanterahana ny rehetra.Njaka AndriantefiarinesyL’article Maep: hita ny paikady hampandrosoana ny fiompiana a été récupéré chez Newsmada.